Guddiga Doorashooyinka oo ka hadlay Shirkii Madaxda ee Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Guddiga doorashada heer Federaal ee lagu muransan yahay ayaa War kasoo saaray Shirkii Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee Magaalada Dhuusamareeb, kaasi oo natiijo la’aan kusoo dhammaaday.
Qoraal kasoo baxay Guddiga lagu muransan yahay ee doorashada ayaa waxaa nasiib darro lagu tilmaamay in afgaran waagii uu ku soo dhamaaday shirkii Madaxda ee Dhuusamareeb ee looga hadlaayay khilaafka ka taagan qbasoomida doorashada dalka.
Guddiga ayaa sheegay inay weli jirto rajo ku aadan in xal laga gaari karo is marin waaga ka taagan doorashada dalka Soomaaliya ka dhaceysa, iyagoo u mahadceliyay dhinacyada isku isku howlay sidii xal looga gaari lahaa is marin waaga taagan.
Sidoo kale Guddiga lagu muransan yahay ayaa Madaxda dowladda iyo kuwa maamul Goboleedyada ugu baaqay in aysan quusan, una istaagaan masuuliyadda ka saaran dalka, ayna hirgeliyaan heshiiskii doorasho ee 17 Sebteembar 2020, heshiiskaas oo ay meel mariyeen Baarlamanka Federaaka.
Guddiga ayaa idoo kale u mahadcelinayay Beesha calaamka oo garab taagan Soomaaliya, kuna gacan siinaysa sidii ay dhibaatooyinkooda u xalisan lahaayeen, ayna ku caawiyaan dowlad dhisidda iyo xal ay gaaraan.